Waxbarashada gabdhaha Pakistan - BBC Somali
Waxbarashada gabdhaha Pakistan
Lahaanshaha sawirka PID
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada, Gordon Brown, ayaa shaaciyay mashruuc tijaabo ah oo looga gol leeyahay sidii waxbarashada loogu baahin lahaa hablaha yar yare e wadanka Pakistan, kuwaas oo la sheegay in badankooda lagu guursado da' aad u yar.
Mr Brown oo mar Ra'iisul wasaare ka ahaa Britain, ayaa sheegay in Pakistan laga dhigi doono meel ka bad-baadsan gabdhaha yar yare ee la guursanayo. Waxaa uu intaa ku daray in macalimiinta goobaha waxbarashada ay muhiim u yihiiin xaqiijinta arrintaasi.
Gordan Brown oo hadlay isaga oo booqasho ku jooga magaaladda Islamabad, ayaa waxa uu shaaciyey in Qaramada midoobay ay bixineeyso 6 million oo pound, halka Midowga Yurubna uu bixinayo 83 million oo pound, si caruur badan oo reer Pakistan ah ay u helaan wax barasho.
Waxa uu intaa ku daray in lacagtaasi lagu taageerayo waxbarashada ay diyaar noqoneeyso, si looga hortago gabdhaha lagu qasbayo guurka ee laga horjoogsado waxbarashada taasi uu ku tilmaamay in ay tahay mid aanan laga aqbali karin dunidan casriga ah.
Mr Brown ayaa sidoo kale sheegay in lacagahan loo diyaarinayo hayadaha waa weyn ee caalamiga ah
Waxa uu inta ku daray in ay ka jiraan dalka Pakistan kooxo doonaya in dadka ay u sahlaan in ay caruurtooda gadaan lana guursado iyagoo aad u da'yar.
Mr Brown ayaa booqashada uu ku marayo wadanka Pakistan, waxaana ku casuumay Raii'sul wasaaraha dalkaasi, Nawaz Sharif.
Waxaa jira dadaalo caalami ah oo lagu doonayo in dhamaan caruurta dunida ay iskuulada galaan marka la gaaro bisha December ee sanadka 2015-ka.
Dalka Pakistan oo keliya ayaa waxaa qiyaastii ku nool 7million oo caruur ah, kuwaasi oo aan iskuulada aadin.